Madaxwayne Xaaf “Yaan Siyaasad iyo wax kale ku mashquuline, aan cadawga u midowno” – Hornafrik Media Network
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa sheegay in aanay xilligan habooneyn in lagu mashquulo siyaasad iyo arrimo kale, isagoo ku baaqay in loo midoobo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
“Yaanan is riix riix siyaasadeed iyo wax kale ku mashquulin ee aan cadawga iska celino, oo aan ka shaqeyno sidii dadkeena gacanta isku qabsan lahaa oo cadawga la isaga celin lahaa”ayuu yiri Axmed Ducaale Xaaf.
Dowladda Federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ayaa waxaa muddooyinkii u dambeeyay ka dhex jiray khilaaf siyaasadeed.
Maamul goboleedyada dalka ayaa si isku mid ah u cambaareeyay Qarixii Sabtidii la soo dhaafay ka dhacay Muqdisho, waxayna ku baaqeen in meel looga soo wada jeesto kooxaha cadawga ee caadeystay dhibaateynta shacabka.
In ku dhow 300 oo ruux ayaa ku geeriyooday qaraxii Zoobe, kaasoo ahaa kii ugu khasaaraha badnaa ee abid soo mara Soomaaliya.